Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay maqaayad ku taalla Muqdisho + Khsaaraha - Caasimada Online
Home Warar Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay maqaayad ku taalla Muqdisho + Khsaaraha
Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay maqaayad ku taalla Muqdisho + Khsaaraha
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin hor dhac ah ka soo saaray qarax is-miidaamin ah oo caawa ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir, gaar ahaan halka loo yaqaano Seddaxda-geed.
Dhanka kale Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil-gaasiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga tacsiyeeyey khasaarihii dhimaaho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxaas caawa ka dhacay mayaaqad ku taalla degmada degmada Shangaani ee gobolka Benaadir.
“Waan cambaareynayaa falka argagixisada Alshabaab ku laayeen dhallinyaro ku fiidsaneysay Muqdisho. Waa bahalnimo kale oo muujineysa sida ay argagixisada uga go’an tahay ciribtirka bulshada iyo mustaqbalka dalka. Allaha u naxariisto intii dhimatay dhaawacyada Allaha bogsiiyo, eheladana Samir iyo Iimaan,” ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey baraha bulshada ee Ra’iisulwasaare Rooble.